Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Window Problems » Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem]
1 Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 25th December 2009, 8:02 pm
တည်နေရာ : ရန္ကုန္-အင္းစိန္
ကျွန်တော် က ယူစီအက်စ်ဝိုင် ကကျောင်းသားဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း လက်ဘ်ခန်းဝင်ရပါတယ ်။ အဲ့မှာ ကွန်ပျူတာတွေ ကအကောင့်တွေခွဲထားပြီး ကိုယ့်ယူဆာအကောင့်နဲ့ကိုယ် ၀င်ရပါတယ်။ လစ်မစ်တက်အကောင့်ပေါ ့။ System
ပိုငး်ဆိုင်ရာပြင်ဖို့ကျတော့ဆရာတွေပဲသိတဲ့ အက်ဒမင်အကောင့်တွေရှိတာပေါ ့။ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့် MP4 ထဲကို Data တွေထည့်ချင်တယ် ။ ဥပမာရေးထားတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေဘာတွေပေါ့နော ်။ ကျွန်တော်တို့သုံးရတဲ့စက်တွေက
USB ကို Disable လုပ်ထားတယ ်။ အဲ့ဒါကို ကျွန်တော် က အက်မင်အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီး ၀င်ပြင်ရင်ရမယ်ထင်တာပဲ ။ ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူး ။ အဲ့တော့ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲဖွင့်ချင်တယ် ။ ခိုးဖွင့်ချင်တယ်ပေါ့ဗျာ ။
အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရလဲမသိဘူး ။ သိတဲ့လူရှိရင်ပြောပြကြပါဦး ။ အကယ်ရွေ့ သူ့ကိုမဖွင့်ပဲနဲ့ USB ကိုပြန်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင် လဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲပေ့ါဗျာ ။ ပြောပြကြပါဦး ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
2 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 25th December 2009, 8:06 pm
knight^of^saint^john wrote: ကျွန်တော် က ယူစီအက်စ်ဝိုင် ကကျောင်းသားဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း လက်ဘ်ခန်းဝင်ရပါတယ်။အဲ့မှာ ကွန်ပျူတာတွေ ကအကောင့်တွေခွဲထားပြီးကိုယ့်ယူဆာအကောင့်နဲ့ကိုယ် ၀င်ရပါတယ်။ လစ်မစ်တက်အကောင့်ပေါ့။System ပိုငး်ဆိုင်ရာပြင်ဖို့ကျတော့ဆရာတွေပဲသိတဲ့ အက်မင်အကောင့်တွေရှိတာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့် MP4 ထဲကို Data တွေထည့်ချင်တယ်။ဥပမာရေးထားတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေဘာတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့သုံးရတဲ့စက်တွေက
USB ကို Disable လုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒါကို ကျွန်တော် က အက်မင်အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီး ၀င်ပြင်ရင်ရမယ်ထင်တာပဲ။ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူး။အဲ့တော့ အက်မင်အကောင့်ကိုပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲဖွင့်ချင်တယ်။ခိုးဖွင့်ချင်တယ်ပေါ့ဗျာ။
အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရလဲမသိဘူး။သိတဲ့လူရှိရင်ပြောပြကြပါဦး။အကယ်ရွေ့ သူ့ကိုမဖွင့်ပဲနဲ့ USB ကိုပြန်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင် လဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲပေ့ါဗျာ။ပြောပြကြပါဦး။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
run မှာ lusrmgr.msc လိုရိုက်ပါ...ပြိးရင် user ကိုသွားပါ..ပြီးရင်ကိုယ်ပြင်ချင်တဲ့အကောင့်တစ်ခုပေါ်ကို right click လုပ်ပါ.. set password ကို click ပါ..processe ကိုနှိပ်ပါ..
ကိုယ် passsword ကိုရိုက်ပါ.... ပြီးရင် computer ကို restart ချပြီးပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ
3 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 28th December 2009, 1:43 pm
net user %username% aDministrat0R
aDministrat0R = မိမိပြောင်းလိုသော Password
4 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 1st January 2010, 8:09 pm
net user %username% 123
(123 က ကျွန်တော်ပြောင်းချင်တဲ့ ပတ်စ်ဝေါ့)။
ကျေးဇူးဂေါ်ဇီလာပါဗျို့။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
5 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 17th March 2010, 6:46 pm
command prompt မှာ net user adminstrator * ရိုက်ထည့် ပြီးရင်သူက Password မေးပါလိမ့်မယ်။ reset လုပ်ချင်ရင် Enter ပဲ ထပ်နှိပ်လိုက်ပါ။ Confirm လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ Enter ပဲထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် သင်ဖြုတ်ချင်တဲ့ User ရဲ့ Password reset ဖြစ်သွားပါပြီ။
မှတ်ချက် => adminstrator နေရာမှာ ပြောင်းနိုင်တယ်နော်
6 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 17th March 2010, 8:48 pm
အပေါ်က ညီလေးကလည်း မေးခွန်းမေးထားတာ မရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်ထင်လို့ပါ။
တကယ်လို့အပေါ်မှာ ဖြေပေးထားတဲ့အတိုင်း ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အက်ဒမင် အကောင့်ရဲ့ပါတ်စ်ဝက်က ချိန်းမသွားနိုင်ဘူးလား။
ဆရာက အဲဒီပါတ်စ်ဝက်က မှားနေတာသိရင် ဒီမှာကိုင်တဲ့ကျောင်းသားတွေ ကလိတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တယ်။
(အမှားပါရင် ဆောရီးပါ။ ၀င်ဆွေးနွေးကြည့်တာပါ)။
7 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 19th March 2010, 10:09 pm
XP နဲ့ Vista အတွက် ISO file ရှိပါတယ်။
Download လုပ်ပြီး boot လုပ်လိုက်ပါ။
8 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 22nd March 2010, 12:52 pm
safe mode ကနေ ၀င်ပြီးချိန်းရင် လွယ်လွယ်လေးပါဗျာ . . . .
9 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 23rd March 2010, 8:18 pm
တည်နေရာ : သီရိေခတၱရာၿမိဳ႕
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-02-12
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 29
ကို bosan ရေ safemode ကနေဘယ်လိုချိန်းလဲဆိုတာ၏
10 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 23rd March 2010, 8:51 pm
comet wrote: ကို bosan ရေ safemode ကနေဘယ်လိုချိန်းလဲဆိုတာ၏
ပထမ safemode နဲ့တက်လိုက်ပါ
ပြီးတော့ Administrator အကောင့်နဲ ့ဝင်လိုက်ပါ။ (သူက ပုံမှန်တက်ရင် ပေါ်နေလေ့ မရှိဘူး)
ပြီးရင် Control Panel ကိုသွား User account မှာ ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ အကောင့်ရဲ့ပတ်ဝက်ကို ပြောင်းချင်ပြောင်း မပြောင်းချင် reset ပြန်ချ လုပ်ချင်တာလုပ်ပါ။
မှန်းပြောရတာ မှန်ချင်မှမှန်မည် (နာမည်တွေပဲနော်..)
11 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 12th April 2010, 8:41 am
12 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 12th April 2010, 9:30 am
အကိုရေ အပေါ်မှာ ရေးထားပေးတယ်လေ။
ကျွန်တော် အမြဲတမ်းသုံးတာကတော့ ကိုEracobengo ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ။
မည္သူမွ် ေမြးဖြားစဥ္ကေလာက္ မဆင္းရဲ။
13 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 12th April 2010, 9:31 am
User account box ပေါ်လာရင် User tap အောက်က U must enter
a user name and password to use this computer ကို အမှတ်ခြစ်ထားတာပြန်ဖြုတ်လိုုက်ပေါ့
14 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 22nd April 2010, 10:08 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-02-20
လည်းadministrator passward တောင်းနေတယ်အစ်ကိုရေလုပ်ပါ
15 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 2nd May 2010, 12:38 pm
ကျွန်တော် အပေါ်က အစ်ကိုတွေပြောသလို အကုန်လုပ်ကြည့်ပြီးပြီ။ တစ်ခုမှ အဆင်မပြေဘူးဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
ကျွန်တော့မှာ CD နဲ့ လုပ်ရတဲ့ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။
ဒါပေမဲ့ စက်တွေက CD drive မပါဘူးဗျ။
အပေါ်ဆုုံးကနည်းက Dennie ဖြစ်နေတယ်၊ ဒုတိယနည်းက admin account ရှိမှ ရမယ်တဲ့၊ အောက်ဆုံး တစ်နည်းကလည်း အပေါ်က အစ်ကိုပြောသလိုဖြစ်နေတယ်။
နောက်ထပ်နည်းလေးရှိရင် ကူညီကြပါဦး။ [You must be registered and logged in to see this image.]
16 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 2nd May 2010, 5:54 pm
Eracobengo wrote: ပထမဆုံး ပွင့်တာနဲ့ဖွင့်ပါ..ပြီးရင်...
lusrmgr.msc လိုရိုက်ပါ...ပြိးရင် user
ကိုသွားပါ..ပြီးရင်ကိုယ်ပြင်ချင်တဲ့အကောင့်တစ်ခုပေါ်ကို right click
လုပ်ပါ.. set password ကို click ပါ..processe ကိုနှိပ်ပါ..
passsword ကိုရိုက်ပါ.... ပြီးရင် computer ကို restart
17 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 5th May 2010, 2:37 pm
အဓီက က USB ကိုပွင့်ချင်တာလား။ admin ကိုပွင့်ချင်တာလား။
18 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem] on 31st July 2010, 9:33 pm
I tried. But There is appear "Access is Denied."
19 Re: Windows XP မှာ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ပတ်စ်ဝေါ့မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။ [Problem]